Grimaa waxa la isticmaalaa marka ilmaha laysugu darayo hawo iyo ogsijiin. Marka la isticmaalayo qulqul waxyar sareeya isku jirku waa kulayl qoyaan leh. Grimmka waxa lagu dhejiyaa dhabanka ilmaha iyo laba "musbaar" oo jilicsan ayaa sanka laga geliyaa waxaana laga siinayaa walxihii laysku daray. Inta ogsijiin/hawo ee la siinayaa waxay ku xiran tahay inta ogsijiin ee uu ilmuhu qaadanayo.
Haddii uu Grimma tartiib u socodo wuxuu bixayaa ogsijiin yar oo nadiifa waxay ku darsamaysaa hawdii caadiga ahayd ee qolka ee uu ilmuhu neefsanayey.